गर्भवतीमा स्क्रब टाइफस र कोभिड–१९, कति गम्भीर ? – Health Post Nepal
२०७८ असोज ६ गते १४:०४
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा स्क्रब टाइफस संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ। सामान्यतयः साउन, भदौ तथा असोज महिनामा स्क्रब टाइफसका संक्रमित बढी देखिने गर्छन्।
यो संक्रमण विशेषगरी गाउँघरतिर बढी देखिने गर्छ। तर यसले गर्भवती महिलामा पार्ने समस्याका बारेमा कमैमात्र चर्चा हुनेगर्छ।
विभिन्न अनुसन्धानहरुले स्क्रब टाइफस गर्भवती महिलामा देखिए बढी जटिल अवस्था आउने देखिएका छन्। स्त्री रोग विशेषज्ञहरुले पनि गर्भवती महिलामा स्क्रब टाइफसले गम्भीर असर पार्ने गरेका अनुभव सुनाउने गरेका छन्।
हाल कोभिड–१९ ले निरन्तरता पाइरहँदा र स्क्रब टाइफस पनि बढ्दै गएकाले ‘मिक्स इन्फेक्सन’ को सम्भावना बढेको छ। गर्भवतीमा यस्तो भए कस्तो अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने राम्रो जानकारी भने छैन।
एक स्त्रीरोग विशेषज्ञको भनाइ अनुसार गतवर्ष एक सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालमा दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा रहेका गर्भवती महिलामा स्क्रब टाइफस र कोरोनाभाइरस’ को मिक्स इन्फेक्सन देखिएको थियो। यसका कारण गर्भवती महिलाको अवस्था अत्यन्त जटिल भएको थियो।
आइसीयु र भेन्टिलेटरको सहायतामा चिकित्सकको अथक प्रयासपछि मात्र संक्रमितको उपचार सफल भएको थियो।
तर, यस्तो सुविधा सबै ठाउँमा, विशेषगरी काठमाडौँबाहिर बिरलै मात्रामा उपलब्ध हुने गर्दछ। अर्थात्, त्यस्ता ठाउँमा संक्रमितको ज्यान बढी जोखिममा हुने प्रष्टै देखिन्छ।
हाल गाउँघरतिर कोरोना फैलँदो क्रममा रहेको र स्क्रब टाइफस पनि देखिँदै जाँदा यी दुइको मिक्स इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ। यी दुइ संक्रमणका केही लक्षण एक अर्कासँग मिल्ने हुँदा नेपालमा धेरैले कोरोनाको मात्र परीक्षण गर्ने गरेको पाहिन्छ।
तर स्क्रब टाइफसले पनि संक्रमण गरेको रहेछ भने एन्टिबायोटिकको उपचारबिना बिरामी जटिलतातिर जाने र मृत्युसमेत हुनसक्छ। तसर्थ कोरोना नेगेटिभ देखिए पनि लक्षणहरु स्क्रब टाइफससँग मिल्दोजुल्दो देखिए तुरुन्त परीक्षण गर्नुपर्दछ।
गाउँघर सबै ठाउँमा स्क्रब टाइफस तथा कोरोना भाइरस परीक्षण र निदान गर्ने सुविधा नहुन सक्छ। समयमा पहिचान गर्नबाट चुक्यौं भने माथि उल्लेखित गर्भवतीमा देखिएजस्तो जटिल अवस्था नआउला भन्न सकिदैँन।
भारतमा गरेको एक अध्ययनले गर्भवतीमा स्क्रब टाइफसले संक्रमण गरे झन्डै ७० प्रतिशत सघन उपचार कक्षसम्म पुग्ने देखाएको थियो। यी संक्रमितमध्ये झन्डै आधा गर्भवतीको गर्भ खेर जाने वा समयअगावै बच्चा जन्मिने समस्या देखिएका थिए। ५ वर्षअगाडि नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषदले गरेको अनुसन्धानले ४७ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको देखाएको थियो। हाल स्क्रब टाइफसको फैलावट योभन्दा बढी जिल्लामा फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अर्थात् गाउघरतिर रहेका गर्भवती महिलाहरु कोरोनासँगै स्क्रब टाइफसको पनि उच्च जोखिममा छन्।
के हुन् स्क्रब टाइफसका लक्षण?
स्क्रब टाइफस संक्रमित भएको ५ देखि २० दिनसम्ममा लक्षणहरु देखिने गर्छन्। उच्च ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, कानमा कृत्रिम आवाज सुनिनु, आँखा रातो हुनु, लिम्फग्रन्थी सुन्निनु, स–साना बिबिरा देखिनु, पसिना आउनु तथा शरीरमा कालो पाप्रो (इस्कार) देखिनु स्क्रब टाइफसका प्रमुख लक्षण हुन्।
समयमा पहिचान र उपचार नगरे निमोनियालगायत विभिन्न अरु अंगहरुमा समेत समस्या देखिन सक्छ। तर समयमै पहिचान गरि उपचार गरे यो रोग पूर्ण रुपमा निको हुनेछ। यसको खोप उपलब्ध छैन। संक्रमण हुन नदिनु नै यसबाट बँच्ने मुख्य उपाय हो।
स्क्रब टाइफस मुसामा हुने एक प्रकारको चीगर माईट भन्ने संक्रमित किर्नाको टोकाईबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। शरीर पुरै छोपिने कपडा लगाउने, घर वरिपरिका ठूला झाडी हटाउने, भुइँँमा बस्दा कपडा ओछ्याएर मात्र बस्ने र मुसा आउने वातावरण सृजना नगर्नु नै स्क्रब टाइफसबाट बच्ने मुख्य उपाय हुन।
अन्तमा, सामान्यतया एकभन्दा बढी घातक संक्रमण देखिए संक्रमितको उपचार गर्न थप जटिल हुने गर्दछ।
यसमा पनि गर्भवतीलाई अरुभन्दा बढी समस्या देखिन सक्छन्। हाल एकपछि अर्कोलाई कोरोनाको संक्रमण देखिँदै गर्दा गर्भवतीहरु पनि यसबाट अछुतो भने रहेका छैनन्।
नेपालमा स्क्रब टाइफसले गति लिँदै गर्दा गर्भवतीहरु थप जोखिममा छन्। स्क्रब टाइफस र कोभिड–१९ को मिक्स इन्फेक्सनसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धानहरु नभएकाले धेरै जानकारी नभए पनि गर्भवतीमा जटिल अवस्था देखिन सक्छ।
गर्भवती अवस्था एउटा विशेष अवस्था हो र यो अवधिमा स्वास्थ्यसम्बन्धित विशेष सतर्कताहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ गर्भवतीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने तथा स्क्रब टाइफससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए तुरुन्त परीक्षण गरि समयमा उपचार गर्न सके गर्भवतीलाई जटिल अवस्थामा जानबाट सहजै रोक्न सकिनेछ।
शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल